Waan Qabsoon Nurraa Barbaadu. « QEERROO
Waan Qabsoon Nurraa Barbaadu.
Qabsootu Wareega Barbaada malee wareegamni Qabsoo hin barbaadu
Goototni kaleessaa waan guddaa nuuf bu’eressanii dhiigaa isaanii chaapessanii taran. Wareega isaanii sanatu sona nagaatti nu geessuuf har’allee wirriiqa. Wareegamni qabsoof kaffalamu wareegama sabaati.
Isaan kaleessa shiftaa diinaan wareegaman sanneentu tokkummaa riqicha guddaan nuuf ijaaree darbe. Isaanirra dhaabannee afaan keenyaan mirga keenya gaafachuu dandeenye. Wareegama isaaniin dhaloota gaaffii mirgaa haafatu taanef. Wareegama gaafa sanaatu har’a keenyaaf utubaa sibiilaa ta’e. Qabsoon qabsoo dhugaa ta’uu nuu kirkaneessan. Isa guyyaa keessa argatan utuu hin taane isa faana dhalatan dursuu isaaniitu har’a keenya tumse. Nutu firii isaan gaafas facaaseenidha, firii tokkummaa uummataa. Firii Oromummaa dhugaa. Eeyyeen isaan yoomiyyuu namoota lapheen sabaa hin dagannedha. Seenaa dhugaa dalagan seenaa haqaa ol nuuf kaahan.
Nuti Qeerroon maaltu nurraa eegamaa?
Jaalako afaan Qawwee dura dhaabbannee humna diinaa sana adduunyaatti baasnee lallabuun, wareegama ulfaataan hiriyaa keenyaa
jaallannu itti dhabuun, lafee itti caccabuun, dhiigni keenya dhangala’uullee kanneen mana hidhataa gidiramanis dirqamni nurra jiru
akka jiru hubachuu nu feesisa. Wareegamni qabsaa’ota dhugaa kaleessaa itita qabsoo har’aaf bu’uura erga ta’ee wareegamni keenya Bilisummaa
dhugaa fuduun Biyya keenya Oromiyaa ijaaruu danda’uu qaba. Isa kana taasisuuf garaa dhugaan qabsaa’uu horachuun waan qaaccessaadha.
Eenyurraa utuu hin taane nuti Uummata keenyaaf nuun ala namni kamillee nuu dhiiguu akka hin dandeenye hubachuu nu barbaachisa. Qabsootu
Wareega barbaada malee wareegamni Qabsoo hin barbaadu. Nagaa mana baatee balaa tasaan Wareegamuu dandeessa, wareegama akkanarra waan dhugaa dubbattee uummatakeef bu’uura Walabummaa riqicha Bilisummaa taatee Wareegamuun gammachuu addaati. Uummatakeef wareegamtu ekeraankee nagaa argata. Tarii har’a wareegama sana kaffaluu baqaaf kanneen qabsoo kana gara biraatti jijjiiruu hedan nu quunnamuu malu.
Yoomillee wanti nuti dagachuu hin qabne Wareegamtoota qabsoo haqaaf nu biraa lubbuun taran sana ta’uu qaba. Addunyaa jiraannu kana keessatti wanti akka Qabsoo hadhaahu jiraachuu dhabuu mala, yoo qabsoon abbootakee galma gahe garuu wanti akkas mi’aahuuf nagaa namaa laatu hin jiru. Nuti har’a biyya abbaa keenyaa irra teenyee kaayyoo abboota kaleessatti cichuun galama gahinsa isaa dirqama ijaan arguuf utuu hin
taanee wareegamnee biyyatti walaba baafachuuf ta’uu hubachuutu nurra jira. Kunimmoo kutannoo ati qabsoof gootu haalaan dabala.
Buchullootaaf gurra ergisuu akka hin qabne si taasisa. Eeyyeen wareegamni abboota keenyaa kan Sumaaleetti lubbuun darbaniif kannee
dirree qabsootti wareegamaniif har’a akka qolee ol qabannee deemnu ta’e. Wareegamni keenyammoo biyya keenya Oromiyaa ol baasee dhaabuu
akka danda’uuf ciminaan irratti hojjechuu nu feesisa. Kanaaf waan guddaan nurraa eegamu dhommoqa aangoo Wayyaanee kana lafaan ganyee
uummata keenya cunqursaa halagaa jalaa baasuuf hojjechuudha. Sharaftootaa dhuuga namaa OPDO haxoofnee uummaticha keessaa
dhabamsiisuu danda’uudha kunis kutannoof murannoo nu barbaada. Qabsoon of kennuu gaafata kanaafimmoo of kenninee galama ga’iinsa isaaf
waliin hojjechuu nu barbaachisa.
Qabsoo uummataaf lubbuu ofii kennuun gootummaadha. Eenyullee taanan kan hedduu si jaallatuun ala lubbuusaa sii kennee bilisummaakeef hin dhama’u. Yoomillee wanti beeku qabnu, namoonni qabsoof lubbuu isaanii kennanii har’allee diina kokkee qaba jiran akkuma jiranitti ta’ee kanneen Wareegama sana sodaaf qabsaa’ota dhugaa dirree Waraanaa jiran irratti jechoota hadhaahaa dammaan makanii darban dhalataniis dhalachuufis akka jiran beekuudha. Inni kun yoomillee gurra nu hatuu hin qabu. Qansaa’aa dhugaan isa of kennee jireenyasaa laatee uummtichaaf bu’ee ba’uudha. Wareegamni Qabsoo hin barbaadu qabsootu Wareega barbaabaada. Kanaaf dursitee of wareegdee qabsootti akkuma seente itti cichuun dirqii taati. Dhiigaan alatti bilisummaa nii arganna jechuun Utuu hin haamiin dhahuuf yaaluudha. Qote bulaan tokko midhaan utuu hin
haamin dhahuuf hin yaalu. Erga haamee booda garuu dhahuun waan isa rakkisu miti. Nuti Oromoonis mana teenyee utuu hin wareegamin
bilisummaa dheebochuun kanaan wal fakkaata. Marti keenya wareegamuuf qophoofnee kaanan akka bilisoomnu shakkii hin qabnu. Bineensi dutaan erga takkaa Waraanamee eenyurraa hin goru, eenyuun hin sodaatu. Nutis Wareegamni keenya danachuun qabsoo iyyuu finiinsuu danda’uu qaba. Isa kanaaf ammoo kanneen har’a jirru of jaallatoo ta’uun nurra hin jiraatu. Dhaloota saba isaa jaallatu taanee argamuu qabna.
« SBO: Ebla1 9 bara 2017. Oduu, Gabaasa Sirna Kabajaa Guyyaa Goototaa 2017 ilaallatuu fi Kora Kutaa ABO Kanaadaa irratti Gaaffii fi deebii Itti Gaafatamaa Kutaa ABO Kanaadaa Jaal Fiqaaduu Eebbaa waliin taasifame Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.
Ijoo Dubbii SQ- Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ebla 18, 2017 »